Echi Ka Ụgbọelu Mbụ Ga-Awụcha n'Ọdụ Ụgbọelu Ọhụrụ Anambra - Igbo News | News in Igbo Language
Apr 29, 2021 - 08:21
Obidoro ọsọ gbachaa kwèsìrì ịkụrụ aka, maka na ọ bụghị mmadụ niile bidoro ọsọ na-agbaru n'isi.
Echi ga-abụ 'ụwa bịa lee' na steeti Anambra, dịka steeti ahụ na-atụ anya ịnabata ụgbọelu mbụ n'ọdụ ụgbụọelu ahụ a rụrụ ọhụrụ na steeti ahụ; n'ihi na ọ na-abụ a rụchaa ụlọ e mepeghị ya emepe, ọ dị ka ọ bụ ahụhụ na arịrị ka a rụụrụ. Ọ na-adịkwa mma onye a gwara agwa ma ọ nụghị anụ, o mee emee ka ọ hụ ahụ.
Nnabata ahụ a ga-anabata ọdụ ụgbọelu mbụ n'ebe ahụ bụ nke e kwupụtara site n'ọnụ Gọvanọ Willie Obianọ, bụ aka na-achị steeti ahụ, n'okwu ya na nsonso a banyere ọdụ ụgbọelu ahụ, bụ nke a rụrụ n'Ụmụeri, dị n'okpuru ọchịchị ime obodo 'Anambra East'.
Oge ọ na-enye nkọwa banyere ya bụ ọdụ ụgbọelu, Gọvanọ Obianọ mere ka amara na o so n'ọdụ ụgbọelu kachara wee buo ibu n'ala Nigeria, ma nwegasịa kpọchakpọcha akụrụngwa dị iche iche a na-ahụta n'ọdụ ụgbọelu dịgasị na mba ofesi, nke mezịrị ka ọ bụrụ ejiamaatụ n'ogoogo mba ụwa.
Na nkọwa ya, o mere ka a mara na obosara ọdụ ụgbọelu ahụ obosara ya ruru ama egwuregwu bọọlụ ise a tụkọtara ọnụ (nke na ụgbọelu bukarịchara ibu na mba ụwa nwere ike ịda ebe ahụ), nwee nnukwu ụlọọgwụ, nwee ebe a na-arụzi ụgbọelu, nwee ọdụ ahịa iri na isii, ebe nlegharịanya, ebe a na-atụ ndụ mmadụ nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ a na-ahụta na mba ofesi, nke mere ya ka ọ pụọ iche.
O kwuru na ngwangwa mmiri zochara n'ebe ahụ, a gaghị ahụzịkwa ya anya ọzọ, ma kọwaa na ya bụ ọdụ ụgbọelu bụ ebe ma ndị njem ma ngwaahịa ga na-ada.
Banyere echi, Gọvanọ Obianọ, onye mere ka a mara na ọ bụ n'ime ọnwa olenaole ka ọchịchị ya malitere ịrụ ọdụ ụgbọelu ahụ, wee rụchaa ya ugbua, gàrà n'ihu kọwaa na nwaafọ Anambra ahụ ná-ewu èwù n'ihe gbasaara njem ụgbọelu, bụ Maazị Alen Onyema ga-ebu ụgbọelu Air Peace ya wee wụchaa n'ọdụ ụgbọelu ọhụrụ ahụ; ebe nwaafọ Ọkịja Anambra ọzọ na-ewu èwù n'ihe gbasara azụmahịa ma bụrụkwa onye obodo Ọkịja, bụ Dọkịta Earnest Obiejesi kwùrù na ọ ga-ebukwa ụgbọelu Helikọpta ya wee wụchaa n'ọdụ ụgbọelu ahụ ụbọchị ahụ.
Dịka ọ na-agba akaebe na ọdụ ụgbọelu ahụ ga-enye aka n'ịkwalite ọnọdụ akụnụba na ọnọdụ mmepe mpaghara steeti Anambra n'izugbe, tinyere ọtụtụ uru ndị ọzọ nke ahụ ga-ewèta; Gọvanọ Obianọ mèkwàzịrị ka a mara na ịrụcha ọdụ ụgbọelu ahụ bụ mmezupute otu n'ime nkwa dị iche iche o kwere Ndị Anambra, ma mekwazie ka a mara na ọchịchị ya ga-emezucha nkwà niile o kwere ụmụafọ steeti ahụ tupu ọ rịtuo n'ọkwa na steeti ahụ.
Ọ kpọkukwazịrị ndị Anambra ka ha gaa n'ihu inye ọchịchị ya nkwàdo, iji gaa n'ihu imezùputè nkwà dị iche icheo kwere ha.